Ka hel Caawimaad Magacaabista Meheraddaada ee loo yaqaan 'Squadhelp' Martech Zone
Ka hel Caawimaad Magacaabista Meheraddaada ee 'Squadhelp'
Jimco, Janaayo 11, 2019 Axad, Janaayo 13, 2019 Douglas Karr
Marabtaa inaad maqasho sheeko naxdin sumcad leh? Shirkaddaadu waxay qorsheyneysaa soo bandhigideeda waxayna ku maalgelinaysaa $ 150,000 domainka, magaca, iyo bilowga… kaliya inay dhamaantood kala dhacaan marka aad ogaato in FBI-du ay baaritaan ku sameysay isla magacaas oo dadweynaha u soo baxay 3VE.
Maaha in [Wakaaladda hadda magac la'aanta ah] ay wax ka qaban lahayd wax kasta oo ay ku saadaalinayso arrimaha noocaas ah. Waxaan si dhab ah ula fajacay, in kastoo, tirada shirkadaha aan sameynin dadaal badan oo ku saabsan magacaabista naftooda. Waxaan ogaadey dhowr meheradood oo tan oo lacag ah ku qarash gareeyey wakaaladaha calaamadeynta, kaliya waxaan ogaadey in magacoodu lahaa macno isku mid ah oo caalami ah, ama xitaa gudaha warshad kale.
Hal shirkad oo aan la shaqeeyay ayaa ii shaqaaleysiisay caawimaad raadinta dabiiciga ah. Dhibaatada degdegga ah ee i haysatay waxay ahayd in sumaddoodu ay la mid tahay dukaanka internetka ee horay u jiray ee warshad kale. Natiija ahaan, waxaa jiray jahwareer degdeg ah oo dadku ka heli kari waayeen khadka tooska ah… xitaa markii ay ku qorayaan magacooda ganacsi natiijooyinka raadinta.
Shirkad kale oo aan caawiyay ayaa sameyn kara baaritaan fudud oo Google ah si loo ogaado in magacooda uu aad ugu dhow yahay kan bogga aan habboonayn. Weli waxay keeneen rajo cusub oo aan ku faraxsanayn in shaqaalahooda ay ku qoreen URL khaldan.
Isku-dabarid waa goob suuq ah oo aad ka heli karto caawimaad magacaabista meheraddaada, helitaanka magaca domain ee jira, iyo xitaa inaad caawimaad ka hesho horumarinta astaantaada. Waxay qoreen ebook aad u wanaagsan oo kugu soo jiidanaya adiga 8 tallaabo oo loogu magac daray meheraddaada:
Maxay tahay ujeedadaada ganacsi?
Waa kuma dhagaystayaasha ay meheraddaadu u adeegayso?
Maxaa gaar ah oo ku saabsan ganacsigaaga? Waa maxay shakhsiyaddaadu?
Ka hel caawimaad hal abuuro kale (taasi waa shaqadooda) si aad uga fikirto magac.
Tuur magacyada aan macnaha lahayn.
Samee falanqaynta luuqadaha si aad u hubiso in magacaagu uusan ku wareerin ama uusan ku habboonayn luqado kale.
Ka fogow in lagaa dacweeyo arrimaha ganacsiga.
Ansixi intaadan noolaan!
Soo dejiso eBook
Isku-dabarid waxay leedahay bulsho hal abuur leh oo kaa caawineysa inaad la timaado magacyo ganacsi oo gaar ah. Nidaamku waa mid si toos ah u toosan:
Bilow Tartankaaga - Dhamaystiraan soonkooda, mashruuc fudud oo kooban, oo ay la wadaagi doonaan beesheena in ka badan 70,000 Hal-abuur.
Fikradaha Ayaa Bilaabaya Inay Ku Soo Shubtaan - Waxaad bilaabi doontaa inaad hesho fikradaha magaca - oo adiga si gaar ah loogu abuuray - daqiiqado gudahood. Daraasiin tartameyaal ah ayaa isku waqti kuu shaqeynaya! Tartanka magac bixinta ee caadiga ah wuxuu helaa dhowr boqol oo fikradood oo magac ah. Fikradaha oo dhan si otomaatig ah ayaa loo hubiyaa helitaanka URL.
Wada shaqeyn iyo isgaarsiin - Fiiri dhammaan soo gudbintaada dashboardkaaga tartanka. Qiimee soo-gelinta, ka tag faallooyinka gaarka ah, oo u dir farriimaha dadweynaha, taasoo horseed u ah geeddi-socodka ku wajahan magaca saxda ah.
Xaqiijin - Ku dooro magacaaga kalsooni. Nidaamkeena ansaxinta gaarka ah waxaa ka mid ah jeegaga domain, qiimeynta halista calaamadaha ganacsiga, falanqaynta luuqadaha, iyo tijaabinta dhagaystayaasha xirfadlayaasha ah.
Xulo guuleystahaaga! - Marka tartankaagu dhammaado, ku dhawaaq guuleystaha - oo diiwaangeli magaca. Xitaa waad ku laaban kartaa Squadhelp si aad u bilawdo magacaaga Logo Design or Tagline project.
Bilaw Tartan Magacaabis ah Iska hubi Suuqooda
Shaacinta: Waxaan isticmaalayaa kuweenna xidhiidhada xiriirka loogu talagalay Squadhelp ee qoraalkan.
Tags: calaamadeyn meheraddaadaMagacaabista meheraddaada
Istaatistikada Suuqgeynta Emailka